Ukraine vs England Euro 2021 Amụma na Tipskụ nzọ Atụmatụ - latabernasanlucar.com
By Sara GrayJuly 1, 2021No Comments
Ukraine na England ga-abụ egwuregwu ikpeazụ na nkeji iri na ise nke Euro 2020. Egwuregwu Ukraine na England ga-eme na July 3 na 2100 elekere Central Eastern European Summer Time na Stadio Olimpico na Rome, Italy
Formdị England, usoro nwere ike na Usoro
England tozuru oke n ‘afọ asatọ mgbe o meriri Germany 2-0 na agba nke 16 na Wembley Stadium na London.
Nke a bụ mmeri akụkọ ihe mere eme nye England n’ọtụtụ ihu m. Maka ndị na – ebido ebido, nke a bụ nke izizi n’ime ihe karịrị afọ iri ise na ise England meriri Germany n’egwuregwu knockout nke nnukwu asọmpi. Oge ikpeazụ nke a mere bụ na World Cup 1966 mgbe akụkụ abụọ ahụ zutere n’ikpeazụ na England meriri Germany iji bulie ya mbụ na naanị World Cup.
Mmeri a jiri mpempe akwụkwọ dị ọcha pụtakwara na England bụ naanị akụkụ nke abụọ na European Championship akụkọ ihe mere eme ka ha ghara ị nabata na nke ọ bụla n’ime egwuregwu anọ mbụ ha nke otu asọmpi, mgbe Germany gasịrị na Euro 2016. Naanị oge England jisiri ike mee nke a. na nnukwu asọmpi bụ ọzọ na 1966 World Cup.
Ndị Fada England enwela mmechuihu na arụmọrụ England na asọmpi ndị isi na knockout nkebi mana ọfụma ọfụma England n’oge Euro 2020 nwere ike inyere ha aka ikwere na “Football na-abịa n’ụlọ!”
England enwebeghị mmeri n’egwuregwu iteghete ma ha sere naanị otu n’ime egwuregwu ndị ahụ. England nwekwara ndekọ nchekwa dị ịtụnanya. Ha enyebeghị otu goolu n’ime egwuruegwu asaa gara aga.
Nke a bụ nke izizi ha tozuru maka ịgbanye aka n’ahapụghị otu goolu n’asọmpi asọmpi kemgbe afọ 1986 iko mba ụwa.
Egwuregwu nke abụọ England na Euros megide Scotland kwụsịrị na 0-0 na ọ bụghị egwuregwu nke ndị na-anọpụ iche ga-enwe mmasị ikiri. England mepụtara nke anọ kachasị ntakịrị ihe mgbaru ọsọ isi n’etiti ndị otu 24 n’oge ọkwa otu.
England bụkwa ndị mbụ na European Championship buliri otu ha na obere goolu e nyere (2).
N’egwuregwu ha na Germany, wasngland na-agba mgba na nkeji iri atọ mbụ mana ha bidoro isonye ndị Jamani na ọkara nke abụọ. England bidoro na-achị achị mgbe iwebata Jack Grealish.
Ndị England na-agwụ ike ma na-akpachapụ anya nke anyị hụrụ n’oge ọgbọ ahụ yiri ka ha agbanweela ka ha bụrụ ndị na-agbasi ike ma nwee ume ndụ mgbe ha chere mmegide siri ike ihu.
Egwuregwu Ukraine na England ga-atọ ụtọ n’ihi eziokwu a dịka England gosipụtara na ha nwere ike ịbawanye nwa oge na egwuregwu dị mkpa dịka anyị hụrụ n’oge arụmọrụ ha megide Germany.
Na 2021 England gbanwere site na usoro 3-4-3 gaa usoro 4-3-3. Ọ na-amasị ha iji ndidi na-ewulite mwakpo site na azụ ma na-ahọrọ ijigide ọgụ ngwa ngwa site na ịga n’ihu ha.
Dị ka ndị na-anọpụ iche, anyị chere n’onwe anyị na England na-egwu egwu nke ukwuu na nkebi nke otu kama igwu egwu ọfụma kama site na ntụgharị uche ha mere ezigbo ọrụ iji jigide ọdịdị ha na igbochi mwakpo.
England gbanwere na 3-4-3 megide Germany nke rụrụ ọrụ nke ọma na England. Emebere nke a iji gbochie nguzobe nke Germany nke gbakwunyekwara 3 etiti azụ.
Anyị na-atụ anya na England ga-aga n’ihu na nguzobe a na asọmpi Ukraine na England.
Ọtụtụ mgbe, ndị na-agbachitere na-agbadosi ike ma na egwuregwu a, ọ nwere ike ịkwali ha elu elu ma nye ha ohere inwere onwe ha na-eche na etiti azụ ha bụ bọọlụ na-egwu egwuregwu etiti ma nwee ikike ịme egwuregwu na ịme egwuregwu.
3-4-3 nwere ike ịdị ka usoro nchekwa na akwụkwọ mana na ndị agha na-ewepụta usoro a nwere ike ịdị ka ihe na-atọ ụtọ dịka ị ga-ahụ site na foto dị n’okpuru.
Nhazi a na-enye ndị England nkwado zuru oke dịka ndị na-eme egwuregwu na mbara igwe nwere ike ịgbanye n’ihu. England ga-ebuso obosara site n’aka ndị nkwado ha bụ Luke Shaw na Kieran Trippier. Harry Kane na-enwe mmasị ịdaba miri iji chịkọta bọl ahụ, na-aga n’ihu nye onye òtù ọlụlụ ya ma mesịa wakpo ya.
Maguire nwere ike ịkụ bọọlụ ogologo site n’aka ekpe, ebe Nkume nwere ike ịkwali mgbe ọ dị mkpa na Kyle Walker nwere ike ịgbanwere Trippier na ndị na-agbachitere bamboozle.
Kyle Walker bụ ihe ziri ezi nke dị ndụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa itinye nrụgide na Ukraine,
Sterling na Grealish ga-egbukarị n’ime igbe ahụ kama ịnọ na mbara.
Abụọ ndị a ga-arụsi ọrụ ike ịlaghachi azụ mgbe England tufuru ikike ha.
Ndị na-agba bọọlụ ahụ bụ Declan Rice na Kalvin Phillips anaghị aga n’ihu kama ha na-elekwasị anya na ichebe ndị na-agbachitere ha site na mwakpo ọgụ na ịga n’ihu bọọlụ na ndị na-aga n’ihu.
Agbanyeghị, Kalvin Phillips nwere ike isonye mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Anyị hụrụ nke a na egwuregwu England na Germany ebe ọ ga-agbaga igbe German mgbe ụfọdụ ma ọ bụrụ na ọ hụrụ oghere mepere na igbe German.
Na ịgbachitere, Luke Shaw na Kieran Trippier ga-alaghachi na nchekwa. N’etiti etiti, ma ọ bụ Grealish ga-alaghachi ka ọdịdị England dị ka 5-3-2 ma ọ bụ na Grealish na Sterling ga-ada azụ ka England dị ka 5-4-1.
England nọ na-agbanye Germany ike n’ike ka anyị wee nwee ike ịtụ anya ọtụtụ na nke ahụ n’oge egwuregwu Ukraine na England.
England buru amụma maka akara maka Ukraine na England
Anyị na-atụ anya na ahịrị ndị England agaghị agbanwe agbanwe ewezuga iwebata Jack Grealish n’ihi egwuregwu ya na-agbanwe arụmọrụ ya na Germany.
Ukraine egosila ugboro abụọ na European Championship, na 2012 na 2016 wee kụtuo ha n’otu egwuregwu.
Mana ekwesighi ka eleda Ukraine anya dabere na ihe gara aga ha. Ha tozuru otu ndị ha na European Qualifiers gụchara karịa Portugal na ebe ha nyere naanị goolu anọ. Naanị Belgium na Turkey ka e nyere obere goolu karịa Ukraine n’oge ntozu oke (goolu atọ).
Ukraine nọ ugbu a na 24th site FIFA.
Mgbe ụdị dị mma n’oge asọmpi Euro 2021, Ukraine nwere ụdị dị egwu. Ukraine tụfuru 6 n’ime 8 egwuregwu na 2020 wee dọpụta egwuregwu 4 mbụ ha na 2021. Mana ha meriri egwuregwu abụọ ha gara aga bụ egwuregwu na-ekpo ọkụ maka Euro.
Ukraine enweghị mgbasa ozi dị ịtụnanya n’oge Euro 2020. Ha tufuru egwuregwu mmeghe ha na Netherlands 3-2. Ha soro nke a site na mmeri North Macedonia wee tụfuo Austria na 1-0.
Ukraine ruru eru maka agba nke 16 dị ka ndị egwuregwu ikpeazụ iji ruo eru maka knockouts dabere na njedebe nke 3 na otu ha.
Agbanyeghị, Ukraine gbara ọfụma megide Sweden na agba nke 16 wee ruo eru maka nkeji iri na anọ n’ihi ọrụ ịtụnanya sitere n’aka Andriy Yarmolenko na Oleksander Zinchenko.
Onye njikwa Ukraine bụ onye egwu egwu lara ezumike nká Andriy Shevchenko bụ onye soro AC Milan na Chelsea gwuo egwu. Ọ na-elekọta ndị otu ahụ kemgbe 2016 ma na-ekwusi ike na mgbanwe mgbanwe.
Na akọ, Ukraine na-egwu na obosara na-abịa site na nkwado zuru oke na ndị na-ebuso ndị na-ebuso ha agha na-egwu egwu.
Serhiy Sydorchuk bụ onye mgbakwasị ụkwụ na-agbachitere onye na-agbachitere onwe ya nke dị mkpa na nchekwa na nkwado nke a na-enye ohere Oleksandr Zinchenko dị afọ 24, onye na-egwuri egwu maka Manchester City na Ruslan Malinovskyi ka ha nwee obi ike na mbuso agha.
Roman Yaremchuk gbara afọ iri abụọ na anọ bụ onye na-agbara ha ọsọ n’igwe ma nwee ike ijide bọọlụ ka ndị otu ya soro ya lụso ọgụ.
Ukraine na-enwe mmasị ịtọlite ​​na nhazi 3-5-2. Zinchenko malitere na etiti aka ekpe ebe Yarmelnko malitere dị ka onye nke abụọ na aka nri. Iji chebe onwe ya, Zinchenko na onye mgbede nke ọzọ dara ada na ndị na – agbachitere atọ ebe Yarmelnko na-echekarị ịdaba etiti nke na-enye Ukraine ụdị 5-4-1.
Na mbuso agha, ndị egwuregwu abụọ ahụ sara mbara ga-aga n’ihu na otu n’ime ndị etiti ahụ ga-esonyekwa na mbuso agha, na-enye Ukraine ụdị 3-2-5.
Ukraine bụ counter na-awakpo akụkụ na ha hụrụ n’anya ịpị ndị na-emegide ha ozugbo ha tụfuru bọl. Nke a gosipụtara na stats. Ukraine nwere nke anọ kachasị elu na egwuregwu ọ bụla.
Akwadoro akara Ukraine
Anyị na-atụ anya na akara nke Ukraine agaghị agbanwe agbanwe na egwuregwu Ukraine na England.
Ukraine vs England Euro 2020 Amụma
Na akwụkwọ England ga-emeri egwuregwu a n’emeghị mgbalị ọ bụla. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị tụlee ọtụtụ ndị otu “esighi ike” na-ewe iwe site na mmeri otu kachasị ike n’asọmpi ahụ, ọ ga-abụ ihe nzuzu iche na England ga-emeri mmeri n’ezie.
Ukraine bu otu ndi juputara n’ihe ijuanya ma ha gosiputara na oge Euro 2020. Ukraine ga-agbanye England n’ike n’ike na ha agaghị agbada na-enweghị ọgụ.
Ukraine nwere ụfọdụ ndị egwuregwu dị ịtụnanya dịka Yarmalenko onye nwere ọnụ ọgụgụ 4 nke kachasị enyere aka na asọmpi ahụ, Zinchenko bụ onye dị egwu sitere n’aka ekpe na Roman Yaremchuk 25 dị afọ iri abụọ nwere oge ịtụnanya na ọkwa klọb.
Anyị na-eche na England ga-aga n’ihu n’ọsọ egwuregwu 7 ha nke na-ejigide akwụkwọ ọcha ma merie 1-0. Anyị anaghị atụ anya ị ga-enweta ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ na-eche na England edebanyela ọnụ ọgụgụ kacha ala nke egwuregwu kwa egwuregwu na 6.8 gbaa kwa egwuregwu.
Nke a bụ ihe na-erughị ọkara nke ihe mgbaru ọsọ iri abụọ na abụọ agbatara n’egwuregwu ọ bụla mgbe a gụnyere stats nke otu niile na Euro 2020.
Raheem Sterling emetụla goolu atọ n’ime goolu anọ ndị England na-agbara, ọ nọ na mma. O nwere ike ịbụ ihe dị mma ịkụ nzọ na ya ka ọ gụọ egwuregwu Ukraine na England.
Ukraine vs England Euro 2020 Nsogbu
Ndị na-ere akwụkwọ na-enye nsogbu ndị a maka egwuregwu Ukraine na England na Euro 2020:
Ugwuoba 8.20Draw 4.50England 1.44
Site na nsogbu ndị a, anyị nwere ike ịhụ nke ọma na England bụ ọkacha mmasị iji merie egwuregwu a.
Bookmaker na-enye maka Ukraine na England na Euro 2020
Ndụmọdụ ịkụ nzọ dị na Ukraine na England
Dịka anyị kwuburu na ngalaba amụma nke Englandvs Ukraine anyị na-ebu amụma na England ga-emeri 1-0. N’ihi nnukwu nsogbu maka England anyị anaghị adụ gị ọdụ ka ị gafere na England n’ihi na ị gaghị enweta nnukwu uru site na ịgba egwuregwu dị mfe.
N’ikwu ya dị ka nkwarụ nkwarụ, oke / n’okpuru nhọrọ ịkụ nzọ nwere ike bụrụ uru bara uru ọ bụghị naanị maka egwuregwu Euro 2020 a n’etiti England na Ukraine kamakwa ọtụtụ egwuregwu bọọlụ n’oge Euro na ọkacha mmasị na okpuru.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ịkụ nzọ anyị nwere maka gị na England na Ukraine egwuregwu na Euro 2020:
N’okpuru ihe mgbaru ọsọ 1.5 ka a ga-enweta n’oge egwuregwu ahụ. Nsogbu 3.25 Handicap ịkụ nzọ, England bidoro na ebumnuche 0, Ukraine na 1, egwuregwu jedebere na ndọta. Nsogbu 3.35England ji ọkpụkpọ goolu 1 merie egwuregwu ahụ. Nsogbu 3.25 N’okpuru ihe mgbaru ọsọ 2.5 nke a ga-emeri n’oge egwuregwu ahụ naanị 1 ma ọ bụ enweghị otu akara. Nsogbu 2.05England iji merie yana n’okpuru ihe mgbaru ọsọ 1.5 ga-emeri n’oge egwuregwu ahụ. Nsogbu 5.40England iji merie yana ihe mgbaru ọsọ 2.5 ka ọ ga-enweta n’oge egwuregwu ahụ. Nsogbu 2.90Raheem Sterling iji nye akara na England iji merie. Nsogbu 3.30
Ọ bụrụ n ’ị masịrị amụma anyị maka asọmpi Ukraine na England na Euro 2020, lelee nyocha ndị ọzọ anyị na-ekwu banyere nkeji anọ: